Qingdao Antai Heavy Industry Machinery iye yasekwa ngowe-2003, ngokusesikweni yatshintsha igama layo ngoku ngo-2011 Ifunyanwa kunxweme West of Qingdao, akukho 30 kuphela km ukuya Qingdao kwizibuko, elula kwezothutho kumazwe angaphandle. indawo yethu yokusebenzela lugubungela ngaphezulu kwe 15000 square metres, ukuba yinkampani uphando, uyilo, ukwenziwa, nokufakwa Consulting efektri kubekho nokuyifeza umphezulu, ukhuselo lokusingqongileyo kunye nesisombululo Foundry.
Company Unamava amakhulu kwaye izisa abasebenzi zobugcisa nobungcali kunye, ikakhulu kuvelisa wadubula kwakho imbabala umatshini, isanti izixhobo wokusindisa, izixhobo ukubumba, kunye nomqokeleli uthuli. Qingdao Antai unamandla ekunikeni uyilo non-standard kunye nokuveliswa ngokweemfuno ezithile umthengi.
Qingdao Antai wadubula imbabala kuza mangaza kuwe kuyilo yayo ekrelekrele, iinkcukacha ezintsha kunye namacandelo ingakumbi ixesha elide. Siqhuba isisombululo jikelele nawe, njengokuba thina zethu zophuhliso, ubunjineli, imveliso kunye nenkonzo emva-ukuthengiswa.
Zonke iinkqubo kwaye kuhlolwa kwaye ivavanywe phambi kokuba unikezelo kwiindibano zethu ukuqinisekisa ufakelo nkqi kwisiza kwaye akhulule imveliso ethembekileyo ngexesha lonke time.Here e Qingdao Antai, emva-yokuthengisa kwakhona inkxaso yiprayorithi eziphezulu ngoko kuqinisekisa ukuba ufumana yonke kukunceda sidingo ezintsha kunikelwa kwaye yavavanyelwa system.Our omkhulu umvuzo wenu ulwaneliseko abaxumi bethu kunye neziphumo azizuzileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Le nkampani iye idlule ISO9 0 0 1: 2 0 0 8, ISO 1 4 0 0 1: 2 0 04, isiqinisekiso CE. ulawulo yethu yenkampani uyifaka nemigangatho yamazwe ngamazwe ukuphunyezwa kwenkqubo operation ISO9 0 0 0 esemgangathweni.
Siye saseka intsebenziswano lwexesha elide kunye nabathengisi brand ngamazwe, ezifana ABB motor; Bethunga ibhokisi nezixhobo, Mitsubishi / OMRON / Siemens izakhi zombane, ISMC nesilinda, SKF & nsk ngokuzala, kunye Asco neevalvu ukubetha. Iimveliso ezisemgangathweni, ixabiso kukhuphiswano kunye nenkonzo ziwubazele, iimveliso zethu ngokubanzi ethengiswa kwimarike yasekhaya kwaye zithunyelwa Amercia, eJamani, eRashiya, Australia, India, Greece, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, Uruguay, Ecuador, Colombia, Sirayeli, Ukraine, eBangladesh, Uzbekistan, Philippines, Hungary, Macedonia ne Indonesia njl
Sihlala babambelele "ukunyaniseka yeyona ethengiswa kakhulu, inkonzo wena na imveliso yokugqibela. ukwaneliseka uMthengi umfutho omkhulu kuphuhliso kwamashishini. "Injongo ukuseka inkqubo yolawulo lomgangatho kunye nolwazi network nenkqubo ingxelo egqibeleleyo ixesha lokufaka ngokwahlukeneyo ukuba umthengi ngamnye, ukunika abathengi kunye nenkathalo lininzi kunye nenkonzo kakuhle, olusebenzayo bhetyebhetye ngokupheleleyo.
sijonge phambili ekusebenzisaneni nani kwaye ngentsebenziswano onyanisekileyo nebandla lakho!